Nezvedu - Taizhou Newkye Electronics Co., Ltd.
Iva wepasi rose otomatiki akavimbika mudiwa!
KuNewKYE, basa redu nderekuita NEWKYE mukurumbira pasirese. Tichiomerera kune hunyanzvi hwehunyanzvi hwe "Specialised Concentrated Focused", uye kuburikidza nekushandira pamwe nemakambani ane mukurumbira nevashandi vehunyanzvi kumba nekune dzimwe nyika, takaunza mari zhinji kune vatengi panguva yekudyidzana kwenguva refu, uye takavabatsira kuwana mamwe budiriro munguva yeruzivo , nehunyanzvi hwedu hwakatsiga muhunyanzvi uye manejimendi.
Kubva kuvambwa kwayo, NEWKYE simbiriras on iyo chinangwa chekuvandudza, nekukurumidza uye pragmatic yekuvandudza bhizinesi kukwikwidza. Isuvakabatira pamwe vazhinji makambani kubva kunyika dzakasiyana pasi rese kuburikidza nemakore akati wandei kuedza .
Yedu zvigadzirwa zvinosanganisira servo mota, inotsika mota, yakavharwa loop inotsika mota, servo chokurukisa, mutyairi, cnc controller, inverter etc. Isu tinoita yakakwana otomatiki mhinduro dzevatengi uye nekuvabatsira kudzora mutengo, kunatsiridza bhizinesi tsika. yakagara ichiwedzera nzvimbo dzinoshanda uye ichivandudza. Nekuda kwekuita kwakanakisa uye nemutengo unonzwisisika, zvigadzirwa zveNewKYE zvave zvichishandiswa zvakanyanya mumhando dzakasiyana dzemabhizimusi emagetsi mashandiro. akadai: Lathe, CNC hwokugaya hwakabvira muchina, Machine centre, achiita zvokutemera muchina,Robot, Kurongedza muchina, Mushonga wemachira, Dispensing muchina, Printer, Plasma yekucheka muchina, Laser yekucheka muchina uye Mbvunza kugadzira muchina, nezvimwe.
Nyanzvi: Ipa zvigadzirwa zvakakwana nekunyatsoziva zvatiri nyanzvi!
Yakaomeswa: Gutsa vatengi nekuteerera nemwoyo murefu kune kwavo maonero uye zvavanoda!
Yakatariswa: Gadzira zvitsva nguva dzose neakare-nemoyo wese kuzvipira kune chigadzirwa R & D!
Kuvimbika: kukosha kwehunhu; Kugadziridza: mweya wetsika; Pragmatism: mutemo wemitengo
Tevera hunoshamisa hunhu, pfuura mutengi kudiwa.
220 Volt Ac Servo mota, Mbeu dzakauchikwa Stepper mota, Ac Stepper mota, Yakavharwa Loop Stepper mota Mutyairi, Servo Motor Actuator, 6 Waya Stepper mota,